Xaalada caafimaad ee Boris Johnson oo kasii dartay iyo wararkii ugu dambeeyey | Xaysimo
Home War Xaalada caafimaad ee Boris Johnson oo kasii dartay iyo wararkii ugu dambeeyey
Xaalada caafimaad ee Boris Johnson oo kasii dartay iyo wararkii ugu dambeeyey
Ra’iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa la dhigay qeybta daryeelka deg degga ah ee isbitaalka, kadib markii xaaladdiisa cudurka coronavirus ay kasii dartay, sida uu sheegay xafiiskiisa Downing Street.
Britain ma lahan wax qorshe ah oo deggan oo la xiriira cidda shaqada sii wadeysa, haddii ra’iisul wasaaraha uu noqdo mid aan wax qaban karin, hase yeeshee Johnson, oo 55 jir ah, ayaa xoghayaha arrimaha dibedda Dominic Raab weydiistay inuu shaqadiisa sii qabto.
Johnson ayaa Axaddii la dhigay isbitaalka, kadib markii 10 maalmood oo xiriir ah lagu arkayey astaamaha cudurka Coronavirus. Saraakiisha ayaa sheegay in Johnson uu dareemayey qandho heer kulkeedu sarreeyo, iyo astaamo kale oo ka mid ah kuwa cudurka Coronavirus.
Ilo-wareedyo ku dhow xafiiska Downing Street ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in Johnson lagu xiray qalabka laga qaato neefta.
“Galabta ayaa xaaladda ra’iisul wasaraaha ay kasii dartay, waxaana kadib talo ka timid dhaqaatiirtiisa la dhigay qeybta xaaladda deg degga ah ee isbitaalka,” waxaa sidaas yiri afhayeen u hadlay xafiiskiisa.
Xafiiska Downing Street ayaa sheegay in go’aanka Johnson lagu dhigay qeybta xaaladda deg degga ah, loo qaatay si loo muujiyo taxaddar dheeri ah.